Manamafy Ny Fifehezany Ny Aterineto Amin’ny Alalan’ny Didy Hitsivolana Vaovao i Belarosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2015 3:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Español, polski, English
Niharatsy ny toe-draharaha araka ny lalàna amin'ny famerana ny trafikan-drongony ao Belarosia, indrindra noho ny “sakay” rongony vaovao fantatra ara-barotra ho ravin-drongony saintetika. Mora kokoa ny mahita sakafo avy amin'ny fahandroana sakay ao amin'ny aterineto, ary nampalaza ny zava-mahadomelina ao Belarosia, Rosia, sy ny firenena hafa manodidina izany. Hatramin'ny Janoary 2014, nandrakotra ny 70%n'ny tsenan-drongony tsy ara-dalàna ao Belarosia ny sakay. Na dia tena misy aza ny olana, dia mihevitra ny manampahaizana fa hadisoana goavana ahafahan'ny manampahefana manaramaso ny fitondratenan'ireo mpiserasera rehetra amin'ny aterineto izany, na inona na inona fifandraisan'izy ireo amin'ny habaka mifandraika amin'ny rongony.
Ity didy hitsivolana ity no andiany farany indrindra amin'ireo andiana lalàna vaovao mametra ny zo antserasera, tsy azo isalasalana, fa miha-matanjaka hatrany ny sivana ao Belarosia satria miha-akaiky ny fifidianana filoham-pirenena.
Tamin'ny Desambra farany teo, nanatontosa fanitsiana ny lalàna mifehy ny media ny governemanta, izay toa mitaky fa ny habaka Belarosiana rehetra amin'ny aterineto dia azo heverina ho fikambanan'ny haino aman-jery. Mahatonga ny habaka amin'ny endriny rehetra ho fehezin'ny Minisiteran'ny Fifandraisana izany, izay manana fahefana hanakatona tsy mila mandalo fitsarana ireo habaka.
Tamin'ny faran'ny volana Febroary, namoaka didy hitsivolana mitaky amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto hanakatona izay aterineto ahafahana tsy mampiseho anarana toy ny Tor sy ny servisy VPN ny Minisiteran'ny Fifandraisana. Nilaza ny manampahefana fa atsofoka ao anatin'ny lisitra maintin'ny fanjakana efa misy ao Belarosia ihany koa ny tolotra rehetra mirona amin'ny tsy fametrahana anarana amin'ireo fitaovana ampiasaina hidirana amin'ny habaka
Fotoana fohy taorian'ny fandaniana ireo fanitsiana momba ny haino aman-jery, dia sehatra an-tserasera lehibe maromaro, anisan'izany ny tranokalam-baovao tsy miankina no voasakana tanatin'ny fotoana fohy. Niantso izany fanakatonana izany ho “fanazaran-tena alohan'ny fifidianana” ireo mpikatroka sy mpanao gazety ao an-toerana. Raha Izany no mitranga dia tsy hampisy zavatra miova any amin'ny farany ny famerana ny fidirana amin'ireo servisy manafina anaram-panondroana mpiserasera sy ny fitehirizana ny tantaran'ny fidirana aterineton'ny mpiserasera sy ny tahiry manokana.